Madaxweyne Siilaanyo Oo Gaadhay Ceergaabo, Weedhaha Uu Kaga Jawaabay Cabashada Sanaag Iyo Puntland Oo Ka Cadhootay Booqashadiisa | Araweelo News Network (Archive) -
Madaxweyne Siilaanyo Oo Gaadhay Ceergaabo, Weedhaha Uu Kaga Jawaabay Cabashada Sanaag Iyo Puntland Oo Ka Cadhootay Booqashadiisa
Ceergaabo(ANN)Madaxwaynaha iyo weftiga uu hoggaaminayo oo saaka xili hore ka baxay magaalada Burco oo ay xalay ku sugnaayeen ayaa galabta gaadhay Magaalada xarunta gobolka Sanaag ee Ceergaabo. Kadib markii uu sii maray degmooyinka Gar adag, Ceel-afweyn iyo deegaanada kale
ee gobolka Sanaaag, kuwaas oo dadweynaha ku dhaqani si balaadhan ugu soo dhoweeyeen. Madaxweyne Axmed (Siilaanyo) ayaa u mahad naqay dadweynaha reer Ceerigaabo iyo maamulka Gobolka Sanaag ee soo dhaweeyay.
Madaxwaynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ka hor intii aanu gaadhin magaalada Cceergaabo, wuxuu deegaamada uu siim maray ka jeediyay khudbado isugu jirta xogwaran, wax qabadka dawlada iyo u jeedda socdaalkiisa uu ku marayo gobolada bari ee dalka, wuxuuna dadwaynaha ku dhaqan magaalada Gar -Adag oo isugu soo baxay geedka caanka ah ee loo yaqano Geedka Gar Adag kala hadlay ujeedada safarkiisa.
“Dadwaynihiina sharafta leh ee halkan jooga ee reer Gar-adag aad iyo aad ayaanu idiinku mahad naqaynaa sida wanaagsan ee aad noo soo dhawayseen, ma aha markii iigu horaysay ee aan Gar-adag imaado oo aan geedkan hoostiisa imaado, waxaan ku aqaanaa ddwaynaha reer Gar- adag calaamad wayn oo ay marwalba wanaagooda ku muujiyan qaranimada, dadnimada iyo jacaylka ay u qabaan ummada iyo dalka Somaliland. Marwalba waxaan ku aqaanaa reer Gar-adag xamaasad badan, dad soo dhawayn wanaagsan aadna u dadaal badan, waxaan qirayaa oo aanan ka been sheegaynin dawladihii hore ha noqoto, ama taayadan maanta joogto ha noqoto inaad tihiin dad aad u dal iyo dawladba jecel”. Ayuu yidhi Madaxweyne Siilaanyo oo ugu horayn dadwaynaha reer Gar-adag uga mahd celiyay sida wanaagsan ee ay u soo dhaweeyeen.
“Waxaan idiin sheegayaa wax yar oo muddo sanad ah ayaanu dawlad ahayn, muddadaa yar waxaan isleeyahay talaabooyin badan oo wax ku ool ah ayaad qaadeen, hadday tahay xaga shaqaalaha dawlada oo lacagtii loo kordhiyay iyo ciidamadaba, hadday tahay xagga Caafimaadka, waxbarshada talaabooyin badan ayaa la qaaday,”ayuu yidhi Madaxweynuhu
Madaxweyne Siilaanyo waxa uu ka hadlay baahida inta baddan lagala hadlo marka uu gaadho deegaanka Sanaag, isagoo yidhi, “Xagga gobolka Sanaag marka aanu nimaadno caam ahaan waxa ugu badan ee lana waydiiyo ee marwalba lanagala hadlo waxay tahay wadadaa dheer ee isku xidha Burco iyo Ceerigaabo, mar walba marka aanu dunida meel tagno, ama cidi noo timaado waxyaabaha ugu horeeya ee aanu marwalba kala hadalno waxaa ka mid ah wadadaa.”
“Balankii aanu qaadnayna maanaan ilaawin laakiin awood dhaqaale oo ay maanta dawladu wadadaa ku dhaqaajiso ma hayso, laakiin waa mid aanaan marnaba dadaalkeeda u yaraysanayn baahiyo kalena dalka way ka jiraan, waxbaana laga qabanayaa, waxaan hubaa in laga dadaalay dhinacyada waxbarshada, caafimaadka, biyaha intii itaalkayaga ah oo aanu ka dadaalnay, laakiin muddadii aanu jirnay may badnayn marnaba ma ilaawayno codsiyada aad noo soo gudbisaan waana mid aanu la wada socono”. Ayuu yidhi madaxwayne Axmed Siilaanyo.
Sidoo kale madaxwaynaha Jaamhuuriyada Somaliland iyo weftigiisu waxaa maanta duhurkii si wayn loogu soo dhaweeyay degmada Ceel Afwayn ee Gobolka Sanaag, wuxuuna meel fagaare ah kala hadlay boqolaal ka mid ah dadwaynaha ku nool magaalada Ceel-afwayn, isagoo uga mahad celiyay dadwaynaha reer Ceel -Afwayn sida muga leh ee ay u soo dhaweeyeen weftigiisa, isla markaana wuxuu war bixin ka siiyay ujeedada socdaalkiisa oo uu ku tilmaamay mid uu ugu kuur gelayo xaalada guud ee dalka.
Madaxweyne Siilaanyo waxaa uu sheegay in baahiyaha ugu daran ee degmada Ceel -afwayn ay ka mid ahayd biyo la’aanta, wuxuuna carabka ku dhiftay inay dawlada Imaaraadka Carabta kala hadleen sidii gobolada dalka Somaliland looga qodi lahaa ceelal badan.
Weftiga Madaxweynaha oo ku guda jira booqasho maalintii afraad ay ku marayaan gobolada bariga Somaliland waxa xubno ka ah marwada koowaad ee Somaliland Marwo Aamina Sh. Maxamed Jirde, Wasiirro, Guddoomiye Ku xigeenka koowaad ee Golaha wakiilada Md. Cabdicasiis Maxamed Samaale, Guddoomiyaha KULMIYE Md, Muuse Biixi Cabdi iyo Xildhibaano ka tirsan Goleyaasha Baarlamaanka Somaliland. waxaana la filayaa inay booqdaan deegaamada kale ee gobolka Sanaag, isla markaana uu kala hadlo fagaare dadweynaha magaalada Ceergaabo.
Dhinaca kale Maamulka Garoowe ee Puntland ayaa canbaareeyay socdaalka Madaxweyne Siilaanyo ee fadhiisinka hore ee ciidanka duleedka Garoowe uu ku tegey doraad, taas oo ay ku andacoodeen inay tahay faragelin lagu sameeyay deegaanka Sool ee ay sheegtaan. Iyadoo booqashada Madaxweynaha Somaliland cabsi ku abuurtay maamulkaa.